Barcelona Oo Miiska Soo Saartay Qorshe Ay Sidii Coutinho Oo Kale Ciyaartoy Ugaga Soo Qafaalanayso Liverpool, Arsenal Iyo Atletico Madrid – GOOL24.NET
Kooxda kubadda cagta waddanka Spain ee Barcelona ayaa diiradda ku haysa laba ciyaartoy oo difaaca uga ciyaara Liverpool iyo Arsenal ee horyaalka waddanka Ingiriiska, kuwaas oo ay doonayso in marka uu suuqu furmo ay ka shaqayso inay sidii Coutinho oo kale uga soo qafaalato.
Sida uu qoray wargeyska Deportivo Mundo, Barcelona oo doonaysa inay xalliso dhibaatada ka haysata difaaca bidix kaddib markii uu ka tegay Lucas Digne isla markaana uu kusoo hadhay Jordi Alba oo kaliya, ayaa waxay raadinaysaa ciyaartoy kale oo booska ku tartama, amaba halkaas ka ciyaara haddii uu Alba dhaawacmo.
Tababare Ernesto Valverde ayaa ka fikiraya in haddii uu dhaawacmo Alba ay adkaan doonto inuu kooxdiisa ka dhex helo ciyaartoy bidixle ah oo halkaas buuxiya, waxaanay taasi ku khasbaysaa in bisha January uu u dhaqaaqo beddel wanaagsan.
Sida uu wargeysku sheegay, Barcelona ayaa bartil-maameedka koowaad ka dhiganaysa difaaca bidix ee Liverpool ee Alberto Moreno oo kaydka u degay markii uu tababare Jurgen Klopp ka door-biday Robertson, waxaana uu Valverde aaminsan yahay inuu si sahlan iyo lacag jaban ku heli doono.
Sidoo kale, difaaca bidix ee Arsenal ee Nacho Monreal ayaa si lama filaan ah ugu soo baxay liiska ciyaartooyada uu tababare Valverde hoosta ku haysto ee uu doonayo inuu ku xoojiyo safkiisa.
Monreal ayaa la wariyey in tababaraha Arsenal ee Unai Emery aanu la dhacsanayn qaab-ciyaareedkiisa, isla markaana uu raadinayo ciyaartoy kale oo uu booskaas ka ciyaarsiiyo, taasina waxay fursad wanaagsan u tahay Barcelona.
Barcelona way ka go’an tahay inay hesho ciyaartoy ka ciyaara baasha bidix ee difaaca, sababtoo ah, waxay xili ciyaareedkan doonayaan in boos walba ugu yaraan laba ciyaaartoy ay u joogaan, si ay ugu guuleysan karaan dhamaan tartamada ay ku jiraan.
Marka laga yimaaddo Monreal iyo Moreno oo labaduba Spain u dhashay, waxay qorshaha ugu jira ciyaartoy saddexaad oo lagu tilmaamay inuu ka horreeyo labadan kale marka la eego sida looga xiisaynayo Camp Nou, waana difaaca bidix ee Atletico Madrid ee Filipe Luis, oo dhowaan shaaciyey inuu ku fikiray inuu ka tago naadigiisa.
Si Kastaba ha ahaatee, bisha January ayaa la ogaan doonaa sida ay Barcelona u maarayso damaceeda iyo qaabka ay u suurtogeliso inay gacanta ku dhigto ciyaartooyada lala xidhiidhinayo.